लूका ११ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
मत्ती मर्कूस लूका यूहन्ना प्रेषित रोमी १ कोरिन्थी २ कोरिन्थी गलाती एफिसी फिलिप्पी कलस्सी १ थिस्सलोनिकी २ थिस्सलोनिकी १ तिमोथी २ तिमोथी तीतस फिलेमोन हिब्रू याकूब १ पत्रुस २ पत्रुस १ यूहन्ना २ यूहन्ना ३ यूहन्ना यहूदा प्रकाश १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४
११ एकचोटि, उहाँ कुनै एउटा ठाउँमा प्रार्थना गरिरहनुभएको थियो। अनि उहाँले प्रार्थना गरिसक्नुभएपछि उहाँका चेलाहरूमध्ये एक जनाले उहाँलाई भने: “प्रभु, यूहन्नाले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाएजस्तै हामीलाई पनि प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्।” २ तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूले प्रार्थना गर्दा यसो भन: ‘हे बुबा, तपाईंको नाम पवित्र पारियोस्। तपाईंको राज्य आओस्। ३ हामीलाई आज दिनभरिको आवश्यकताअनुसार भोजन* दिनुहोस्। ४ अनि हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नुहोस्, किनकि हामी पनि हाम्रो हरेक ऋणीलाई* क्षमा दिन्छौं अनि हामीलाई प्रलोभनमा पर्न नदिनुहोस्।’ ” ५ साथै, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “मानौं, तिमीहरूमध्ये कसैको एक जना साथी छ र तिमी मध्यरातमा ऊकहाँ गएर यसो भन्छौ: ‘ए साथी, मलाई तीन वटा रोटी पैंचो देऊ, ६ किनकि मेरो एक जना साथी यात्रा गरेर भर्खरै मकहाँ आएका छन्‌ र उसलाई खुवाउन मसित केही छैन।’ ७ अनि उसले भित्रबाट यस्तो जवाफ दिन्छ: ‘मलाई दुःख नदेऊ। ढोका बन्द भइसकेको छ र मेरा बालबच्चाहरू मसितै ओछ्यानमा सुतिसकेका छन्‌। त्यसैले उठेर म तिमीलाई केही दिन सक्दिनँ।’ ८ म तिमीहरूलाई भन्छु, साथीको नाताले नदिए तापनि तिमीले खुरन्धार बिन्ती गरिरहेकोले उसले उठेर तिमीलाई चाहिएको कुरा दिनेछ। ९ त्यसैले म तिमीहरूलाई भन्छु, मागिरहो अनि तिमीहरूलाई दिइनेछ; खोजिरहो अनि तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ; ढकढक्याइरहो अनि तिमीहरूको लागि उघारिनेछ। १० किनकि जसले मागिरहन्छ त्यसले पाउँछ; जसले खोजिरहन्छ त्यसले भेट्टाउँछ अनि जसले ढकढक्याइरहन्छ त्यसको निम्ति उघारिनेछ। ११ तिमीहरूमध्ये कोचाहिं यस्तो बुबा होला, जसले आफ्नो छोराले माछा माग्दा माछाको सट्टा सर्प देला? १२ अथवा उसले अण्डा माग्दा बिच्छी देला? १३ त्यसकारण, यदि तिमीहरू पापी भईकन पनि आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रा कुरा दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा बस्नुहुने बुबाले उहाँसित माग्नेहरूलाई झन्‌ कत्ति धेरै पवित्र शक्ति दिनुहुनेछ!” १४ पछि येशूले एक जना मानिसबाट गुँगो बनाउने दुष्ट स्वर्गदूत धपाउँदै हुनुहुन्थ्यो। दुष्ट स्वर्गदूत निस्केपछि त्यो गुँगो बोल्न थाल्यो अनि भीड छक्क पऱ्यो। १५ तर तिनीहरूमध्ये कोही-कोहीले यसो भने: “यसले दुष्ट स्वर्गदूतहरूको शासक बालजिबुलको* मदतले दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई धपाउँछ।” १६ तर अरूले चाहिं उहाँको परीक्षा गर्न उहाँसित स्वर्गबाट एउटा चिन्ह माग्न थाले। १७ तिनीहरूको विचार थाह पाएर उहाँले भन्नुभयो: “जुन राज्यभित्र फूट छ, त्यो उजाड हुन्छ अनि जुन घरभित्र फूट छ, त्यसको पतन हुन्छ। १८ त्यसैले सैतान आफैमा पनि फूट छ भने त्यसको राज्य कसरी टिक्ला र? किनकि तिमीहरू भन्छौ, म बालजिबुलको मदतले दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई धपाउँछु। १९ यदि म बालजिबुलको मदतले दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई धपाउँछु भने तिमीहरूका छोराहरूचाहिं* कसको मदतले धपाउँछन्‌? यसैले तिमीहरूका छोराहरूले नै तिमीहरूलाई गलत साबित गर्नेछन्‌। २० तर यदि म परमेश्वरको पवित्र शक्तिले* दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई धपाउँछु भने यसको मतलब, परमेश्वरको राज्य आएको तिमीहरूले चालै पाएका रहेनछौ। २१ हातहतियारले सुसज्जित बलियो मानिसले आफ्नो घरको रखवाली गरेको छ भने उसको सम्पत्ति सुरक्षित हुन्छ। २२ तर ऊभन्दा बलियो कुनै मानिस आएर उसलाई हरायो भने त्यसले ती सबै हातहतियार लैजान्छ, जसमाथि उसले भरोसा गरिरहेको थियो। अनि ऊबाट लुटेका कुराहरू भाग लगाउँछ। २३ जो मेरो पक्षमा छैन, त्यो मेरो विरुद्धमा हुन्छ अनि जसले मसँग बटुल्दैन, त्यसले छरपस्ट पार्छ। २४ “जब एउटा दुष्ट स्वर्गदूत एक जना मानिसबाट बाहिर निस्कन्छ, तब त्यसले सुक्खा ठाउँहरूमा विश्रामस्थल खोज्छ तर कतै नभेटेपछि त्यसले भन्छ, ‘म जुन घरबाट निस्केर आएँ, त्यहीं फर्किन्छु।’ २५ अनि त्यहाँ पुग्दा त्यसले त्यो घर सफा पारेर सजिसजाउ गरिएको पाउँछ। २६ तब त्यो आफ्नो बाटो लाग्छ र आफूभन्दा झन्‌ दुष्ट सात वटा स्वर्गदूतलाई सँगै लिएर आउँछ र त्यस मानिसभित्र पसेर तिनीहरू त्यहीं बस्छन्‌। अनि त्यस मानिसको पछिल्लो अवस्था पहिलेको भन्दा झन्‌ खराब हुन्छ।” २७ उहाँले यी कुरा भन्दै गर्दा भीडको माझबाट एउटी स्त्रीले ठूलो स्वरमा उहाँलाई यसो भनी: “धन्य हुन्‌ ती आमा, जसको कोखबाट तपाईंले जन्म लिनुभयो र जसको स्तन तपाईंले चुस्नुभयो!” २८ तर उहाँले भन्नुभयो: “त्यसो होइन। धन्य त तिनीहरू हुन्‌, जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन्‌ र पालन गर्छन्‌!” २९ भीड जम्मा हुन थालेपछि उहाँले यसो भन्न सुरु गर्नुभयो: “यो पुस्ता दुष्ट पुस्ता हो; यसले चिन्ह खोज्छ। तर यसलाई योनाको चिन्हबाहेक अरू कुनै चिन्ह दिइनेछैन। ३० जसरी योना निनवेवासीहरूका लागि चिन्ह भए, त्यसरी नै मानिसको छोरा पनि यस पुस्ताको लागि चिन्ह हुनेछ। ३१ न्यायको बेला दक्षिणकी महारानी यस पुस्ताका मानिसहरूसँगै खडा हुनेछिन्‌ र यिनीहरूलाई दोषी ठहराउनेछिन्‌ किनभने सुलेमानका बुद्धिका कुराहरू सुन्न तिनी पृथ्वीको पल्लो छेउबाट आइन्‌। तर हेर, सुलेमानभन्दा पनि ठूलो कोही एक जना यहाँ छ। ३२ न्यायको बेला निनवेका मानिसहरू यो पुस्तासँगै खडा हुनेछन्‌ र यसलाई दोषी ठहराउनेछन्‌ किनभने योनाले प्रचार गर्दा तिनीहरूले पश्‍चात्ताप गरे। तर हेर, योनाभन्दा पनि ठूलो कोही एक जना यहाँ छ। ३३ मानिसले दियो बालेर तहखानामा राख्दैन न त पाथीले छोप्छ तर भित्र पस्ने सबैले उज्यालो देखून्‌ भनेर त्यसलाई पानसमाथि राख्छ। ३४ शरीरको बत्ती तिम्रो आँखा हो। तिम्रो आँखा निर्मल* छ भने पूरै शरीर पनि उज्यालो हुन्छ तर तिम्रो आँखा दुष्ट छ भने तिम्रो शरीर पनि अँध्यारो हुन्छ। ३५ त्यसैले सतर्क रहो। कतै तिमीमा भएको उज्यालो अँध्यारो नहोस्। ३६ त्यसकारण, तिम्रो शरीर पूरै उज्यालो छ र कुनै पनि भाग अँध्यारो छैन भने दियोको किरणले दिने उज्यालोजस्तै तिम्रो शरीर पनि पूरै उज्यालो हुनेछ।” ३७ उहाँले यो कुरा भनिसक्नुभएपछि एक जना फरिसीले उहाँलाई आफूसित खान निम्त्याए। त्यसैले उहाँ जानुभयो र खान बस्नुभयो। ३८ तर खानअघि उहाँले हात नधुनुभएको* देखेर ती फरिसी छक्क परे। ३९ तर प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो: “तिमी फरिसीहरू कचौरा र थालको बाहिरचाहिं माझ्छौ तर तिमीहरू भित्र भने लुट र दुष्टता भरिएको हुन्छ। ४० ए बेसमझ मानिसहरू! जसले बाहिरी भाग बनाउनुभयो, उहाँले नै भित्री भाग पनि बनाउनुभएको होइन र? ४१ यसैले मनभित्रका कुराहरू दान देऊ र हेर, बाँकी सबै कुरामा तिमी शुद्ध हुनेछौ। ४२ तर धिक्कार छ तिमीहरूलाई, ए फरिसीहरू हो! किनकि तिमीहरू पुदिना, सोमलता* र अरू सबै वनस्पतिका दशांश चढाउँछौ तर न्याय र परमेश्वरप्रतिको प्रेमलाई चाहिं बेवास्ता गर्छौ। तिमीहरूले ती कुराहरू चढाउनुका साथै न्याय र परमेश्वरप्रतिको प्रेमलाई पनि छोड्नु हुँदैनथ्यो। ४३ धिक्कार छ तिमीहरूलाई, ए फरिसीहरू हो! किनकि तिमीहरू सभाघरहरूमा सबैभन्दा अगाडि बस्न रुचाउँछौ र बजारहरूमा विशेष अभिवादन चाहन्छौ। ४४ धिक्कार छ तिमीहरूलाई! किनकि तिमीहरू ती चिहानहरू जस्ता छौ, जो बाहिरबाट देखिंदैनन्‌ अनि चालै नपाई मानिसहरू त्यसमाथि टेकेर हिंड्छन्‌।” ४५ व्यवस्थामा पोख्त एक जना मानिसले यो सुनेर उहाँलाई भन्यो: “गुरुज्यू, यस्तो कुरा गरेर तपाईं हाम्रो पनि अपमान गर्दै हुनुहुन्छ।” ४६ त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो: “ए व्यवस्थामा पोख्त मानिसहरू, तिमीहरूलाई पनि धिक्कार छ! किनकि तिमीहरू मानिसहरूलाई बोझिला नियमहरूको भारी बोकाउँछौ तर आफू भने एउटा औंलाले पनि ती छुँदैनौ। ४७ “धिक्कार छ तिमीहरूलाई! किनकि तिमीहरू ती भविष्यवक्ताहरूको चिहान बनाउँछौ, जसलाई तिमीहरूकै पितापुर्खाहरूले मारे। ४८ आफ्ना पितापुर्खाहरूका कर्तुत थाह हुँदा हुँदै पनि तिमीहरू तिनीहरूले मारेका भविष्यवक्ताहरूको चिहान बनाएर तिनीहरूलाई आफ्नो मन्जुरी दिन्छौ। ४९ यसैले आफ्नो बुद्धि प्रकट गर्दै परमेश्वरले यसो भन्नुभयो: ‘म तिनीहरूकहाँ भविष्यवक्ता र प्रेषितहरू पठाउनेछु र तिनीहरूले उनीहरूमध्ये कसै-कसैलाई मार्नेछन्‌ र कसै-कसैको खेदो गर्नेछन्‌, ५० ताकि संसारको प्रारम्भदेखि* मारिएका सबै भविष्यवक्ताहरूको रगतको हिसाब यस पुस्तासित लिन सकियोस्, ५१ हाबिलको रगतदेखि जकरियाको रगतसम्म, जसको हत्या वेदी र मन्दिरको बीचमा भएको थियो।’ हो, म तिमीहरूलाई भन्छु, त्यसको हिसाब यस पुस्तासित लिइनेछ। ५२ “ए व्यवस्थामा पोख्त मानिसहरू, तिमीहरूलाई धिक्कार छ! किनकि तिमीहरूले ज्ञानको साँचो खोसेर लग्यौ। तिमीहरू आफू पनि भित्र पसेनौ र पस्न खोज्नेहरूलाई पनि रोक्न खोज्यौ।” ५३ त्यसैले उहाँ त्यहाँबाट बाहिर निस्कनुभएपछि शास्त्री र फरिसीहरूले उहाँलाई घेरे अनि अरू थुप्रै विषयमा प्रश्नमाथि प्रश्न गर्न थाले। ५४ तिनीहरू उहाँको मुखबाट निस्केको वचनमा उहाँलाई फसाउन दाउ हेरिरहेका थिए।
^ लूका ११:३ * शाब्दिक, “रोटी।”
^ लूका ११:४ * वा, “हाम्रो विरुद्ध पाप गर्नेलाई।”
^ लूका ११:१५ * यो सैतानको अर्को नाम हो।
^ लूका ११:१९ * अर्थात्‌, “चेलाहरूचाहिं।”
^ लूका ११:२० * शाब्दिक, “परमेश्वरको औंलाले।”
^ लूका ११:३४ * वा, “आँखाले एकनास हेर्छ; एउटै कुरामा केन्द्रित।”
^ लूका ११:३८ * यसले सफाइसम्बन्धी रीतिथितिलाई बुझाउँछ। मर्कूस ७:३ हेर्नुहोस्।
^ लूका ११:४२ * ग्रीकमा “पेगानोन।” यो औषधी र मसलाको रूपमा प्रयोग गरिने बिरुवा हो।
^ लूका ११:५० * मत्ती २५:३४ को फुटनोट हेर्नुहोस्।